Kuparadzira Vatariri veNzvimbo Yako Yeminamato Yekunonoka | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Kuparadzira Vatariri veNzvimbo Yako Yeminamato Yekunonoka
Jeremiah 30:16 Naizvozvo vese vanokudyira vachadyiwa; nevadzivisi vako vese, mumwe nomumwe wavo, vachatapwa. vanokuparadza vachava chinhu chakapambwa, uye izvo zvandakabatira zvichava zvako, ini ndichaapa kuti zvive chinhu chakapambwa.
Nhasi tichave tichiita nyaya yemunamato ine gumi, tichitambisa maparara emunamato yako yekumberi. Masasi e ramangwana ma satanic mauto kana vamiririri kuti ikoko migove ndeyokubatisa destiny yako. Destiny wasters inogona kuuya nenzira dzakasiyana, inogona kuuya nenzira yeyakaipa tsika, shamwari yakaipa kana maitiro akaipa. Wese mwana waMwari anofanira kuziva kuti Dhiyabho ari shure kwako. Iye anoziva kuti iwe une tarisiro yakajeka muhupenyu uye Iye anomira chero kuti akurambidze. Asi iwe paunenge uchiita izvi zvinamato zvemunamato nhasi, unenge uchitsvaira matongo ehupenyu hwako muna Jesu. Wese mweya wekwauri kuda kupedzwa uchadyiwa muzita raJesu.
Kuparadza matongo ekwavo mhedzisiro yemunamato mapoinzi a yemweya yehondo munamato poindi. Kuti ubudirire muhupenyu semutendi, unofanirwa kushanda nesimba mumuviri uye pamweya. Kushanda kwako pamweya ndiko kunochengetedza basa rako renyama. Dhiyabhorosi anogara achishandura izvo zvinoitika muhupenyu uye zvevanhu vanobva kunzvimbo yemweya, Naizvozvo, kana iwe uchida kutora chinzvimbo chehupenyu hwako, kuzvisunungura pachezvako kubva kune wasters of destiny, iwe unofanirwa kuve uri munamato wekurwira mhare. Iwe unofanirwa kuwedzera moto wehupenyu hwako hwekunamatira. Chero nguva yeminamato yedu pairi pamoto, hupenyu hwedu huchazara nesimba. Ini ndinoparura pamusoro pehupenyu hwako nhasi, satani wese anoedza kuparadza destiny yako achaparadzwa nhasi muzita raJesu.
1. Ndinokutendai Ishe nengirozi dzenyu, makasunungura kundiropafadza panguva yemunamato ino, muzita raJesu.
2. Ishe, ndinonamata kuti tiregererwe zvivi zvedu zvese (pachedu uye pamwe chete), muzita raJesu.
3.Mweya Wakachena, ndinatse zvivi zvese kuitira kuti Ishe vandinzwe, muzita raJesu.
4. Ropa raJesu, simbisa nzvimbo iyi ikozvino, muzita raJesu.
5. Chero dhimoni rakanzi rirwe neni, wakamirirei? Sungwa, muzita raJesu.
6. Chero satanic muganho kana muganho unondirwisa, ngaabviswe, muzita raJesu.
7. Ini ndinonyoresa hupenyu hwangu muhushumiro yekubwinya, muzita raJesu.
8. O Ishe, rukudzo rwangu rwakavigwa ngaruvhurwe, muzita raJesu.
9. Chero simba, rakapihwa kundiviga ndiri mupenyu, ndisungwe nemoto, muzita raJesu.
10. Chero simba, rakagara pakubwinya kwangu, ngavaziviswe nemoto, muzita raJesu.
11. Kuporofita kwese kwa satanic, kupesana nekwandiri, backfire, muzita raJesu.
12. Zvombo zvekuparadza zvakanangana neni, murazvo wemoto, muzita raJesu.
13. Chero chombo chedima, chinorwisa kubwinya kwangu, hushumiro nokuzadzikiswa kwewanano, murazvo wemoto, munaJesu
14. Chero simba rinosunga kufambira mberi kwangu ngariparadzwe izvozvi muzita raJesu
15. Mari yega yega yaakandipa nevarume / vakadzi vakaipa ndinokuwisira mubhegi rangu remari neropa raJesu, muzita raJesu.
16. Wese satanic minister anoshandira zvakaipa muhupenyu hwangu, nyarara nekusingaperi muzita raJesu
17. Ini ndinodzima neropa raJesu jenasi huroyi hwese hwakanyorwa kwandiri uye nemhuri yangu muzita raJesu
18. Ini ndinoramba mweya wehurombo, kushomeka uye kuda muhupenyu hwangu muzita raJesu
19. Ini ndinodzokera kune anotumira miseve yeusatani yega yakadzoserwa kunzira yangu munaJesu zita
20. Ini ndinoburitsa zviroto zvangu kubva kune chero bhokisi satanic muzita raJesu
21. Ini ndinodzokera kune anotumira mabhebhi akaipa ese anonongedzwa kumaroto angu muzita raJesu.
22. Ini ndinoramba mweya wekutenderedza kutenderera uye hakuna kufambira mberi muzita raJesu
23. Ini ndinoramba mweya yega yega yehusiku (Kuoma) muhupenyu hwangu muzita raJesu
24. Mukuzivisa kuti hapana simba rerima rinozokanganisa zvibodzwa zvangu nemuzita raJesu
25. Ini ndinogeza neropa raJesu kubva kumavara akaipa edhiabhori muzita raJesu
26. Ini ndinosunungura moto waMwari pane ese kufambira mberi diinter muzita raJesu
27. Ini ndakavhara muromo weye wese akashata reporter makomborero angu muzita raJesu
28. Ini ndakavhara muromo wegezi wese wakashata wemaropafadzo angu muzita raJesu
29. Ini ndinoparadza munhu wese wakasviba wedhiabhori achirwira kufambira mberi kwangu muzita raJesu
30. Wese mweya yakaipa inokwikwidza nemutumwa wemaropafadzo angu, usungwe uye isungwe ngetani dzisingaperi muzita raJesu
Previous nyayaVamise Vasati Vamira Iwe Pfungwa dzeMunamato
inoteveraKurera Zvakaipa Zvidyarwa Munamato Matipi
Khummo Chikunguru 17, 2020 Pa 7: 27 pm
Ndatenda nekuda kwemunamato uyu.
Ndinotenda mweya mutsvene wakadonhedza izvi mumweya mangu, ndinogara ndichirwisa nezvose zvandinoita, kunyanya kana zviri zvedzidzo. Pakunamata nekuchema nezve iyi mamiriro asina kugadzikana ndakaendeswa kune chimwe chinhu chinoti "destiny wasters" iyo yakanditungamira kune ino peji.
Mwari ngavakuchengetedza uye vakuropafadze.
Odogwu Mbudzi 12, 2020 Pa 10: 52 pm
Ndinokutendai, munhu waMwari. Kwemakore angangoita gumi nemaviri basa rangu, mabhizinesi uye zvese zvandanga ndichifamba zvakanaka zvamira. Shamwari dzese dzandakatsigira uye wese ari pamberi pangu. Ndanga ndichinamata kwemakore gumi nemaviri ikozvino, uye ndafunga kutsvaga minamato ndichipesana neasina kupaza, uye ino saiti ine mbiri yakakwira. Ndinotenda Mwari nekuti Ari kuita nehushumiri uhu. Ndinoziva kuti Ari kuzopindura munguva pfupi muzita raJesu, Ameni.
pst Samueri Kurume 22, 2021 Pa 9: 09 am
Kutenda uye Mwari varopafadze.
Kunamatira Rubatsiro NeNdima dzeBhaibheri
Kununurwa minamato Kubva Kubatanidzwa kweChivi
Munamato Kuti Uzadzwe neMweya Mutsvene